Filtrer les éléments par date : vendredi, 03 mai 2019
vendredi, 03 mai 2019 20:10
Fibatana fonjamby: Taranja amiratan’ny Malagasy
Noporofoin’ny solontena malagasy tany Le Caïre Egypta nandritra ny fifaninanana Afrikana natao ny 23 hatramin’ny 30avril lasa teo fa taranja tena ahombiazan’ny Malagasy ny fibatana fonjamby.
Medaly volamena 06 sy volafotsy 03 no norombahan’ny solontena malagasy tany an-toerana tamin’izany. Tanjon’izy ireo ny lalao Olimpika 2020. Fifaninanana iraisam-pirenena miisa efatra no mbola hatrehin’izy ireo mialoha izany.
Tafaverina an-tanidrazana ny alarobia teo ireo atleta avy niatrika ny lalao tany Egypta ireo.
vendredi, 03 mai 2019 19:57
Fitsaboana ny homamiadana: Hanome “machine de radiothérapie” i Inde
Hanampy amin’ny fanatsarana ny fandraisana an-tànana ireo marary voan’ny homamiadana ny fahazoan’i Madagasikara ity “machine de radiothérapie” avy amin-dry zareo Indiana ity, ary tsy ho ela ny hanolorana izany amin’ny fomba ofisialy.
Ankoatra izany, nodinihina ny fiaraha-miasa mahakasika ny fananganana fotodrafitrasa handraisana an-tànana ireo marary voakasik'ireo aretina tsy maintsy tsaboina any ivelany, toy ny aretina mpahazo ny voa.
Nivoitra io nandritra ny fitsidihana ombam-panajana nataon’ny ambasadaoron’i Inde, miasa sy monina eto Madagasikara, Abhay KUMAR, ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, Pr Julio Rakotonirina.
vendredi, 03 mai 2019 19:32
Soarano: Andro maneran-tany ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety
Nifamotoana tetsy Soarano, manoloana ny tsangam-bato fanamarihana ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ireo mpanao gazety, ireo olona manohana ny fahalalahana maneho hevitra.
vendredi, 03 mai 2019 19:31
Mahazomà – Maevatanana: Navotsotr’ireo mpaka an-keriny ilay vehivavy bevohoka
Ny ampitson’ny fakana an-keriny, dia navotsotr’ireo mpaka an-keriny ilay vehivavy bevohoka nisy nanao takalonaina tao amin’ny Fokontany Tanimbaritsara, Kaominina Mahazomà, Faritra Betsiboka ny alin’ny talata 30 aprily 2019.
Nandoavan’ny fianakaviana vola 12 tapitrisa Ariary ho tambin’ny famotsorana azy. Salama tsara ilay ramatoa, na teo aza ny tebitebin-tsaina nianjady taminy.
Efa-dahy no voalaza fa nanatanteraka izao fakana an-keriny izao.
Nametraka laharana finday ireo olon-dratsy taorian’ny nandehanany. Rehefa nantsoin’ny raim-pianakaviana io laharana io dia nisy nandray tokoa, ary « nilaza fa aty aminay ny vadinao ».
Isany manana omby betsaka ao an-tanàna ity fianakaviana lasibatry ny fakana an-keriny ity.
vendredi, 03 mai 2019 10:26
Vola malagasy: Nihen-danja kely
Tapa-bolana lasa izay, ny 17 aprily 2019, dia 3 993.7 MGA ny 1Euro, raha 3 528.69 MGA (ariary) kosa ny 1$USD.
Ny fiandohan'ny volana mey kosa, 02 mey 2019, dia niakatra ny 1Euro, lasa 4 048.27 MGA, ary ny 1$USD tsy maintsy novidiana 3 620.42 MGA.
Antsoina hoe mihen-danja ny vola rehefa mila maromaro kokoa hividianana vola vahiny hafa. Mahazo aina kosa ny vola rehefa kelikely mifanantona amin'ilay vola vahiny ny sandany hividianana na hanakalozana aminy.
(Sary sy loharano Banky Foiben'i Madagasikara)
vendredi, 03 mai 2019 09:55
Ambohitsoa Boriborintany faha II: Tonga nijery fanatsarana ny lalan-kely i Lanto Rakotomanga
Lalana iray ao Ambohitsoa, mampifandray an'i Ampamantanana ary Androndra no nampitaraina ny mponina, ka tonga nijery izany tety an-toerana ny kandida ho solombavambahoaka ato amin'ny Boriborintany faha II, Lanto RAKOTOMANGA.
Lalana izay ratsy dia ratsy tokoa, nefa mahatratra hatrany amin'ny 4 500 ny olona mivezivezy sy mampiasa izany lalan-kely izany.
Anisan’ny asa hatao eraky ny boriborintany faha II, eraky ny Antananarivo ary Madakasikara izany fanamboarana lalana isaky ny elakelan-trano izany, hoy i Lanto RAKOTOMANGA, raha ny programan'ny Filohantsika no jerena, koa santatra ambavarano ihany izao.
vendredi, 03 mai 2019 09:49
Toamasina I: Nikarakara fitsaboana maimaimpoana Irmah Naharimamy
Mitohy hatrany ny asa soa ataon'i Kandida ho solombavambahoaka eto Toamasina I, Irmah Naharimamy, nikarakara fitsaboana maimaimpoana.
Nambarany tamin'izany fa ilaina ny fahadiovana, ary ilaina ny fahasalamana ho an'ny rehetra. Fantatro hoy izy fa maro ireo sahirana ka tsy afaka manantona mpitsabo, na ny hividianana fanafody tsy misy, ka anisan'ny ezaka ho ataony rehefa lany solombavambahoaka ny fametrahana ny lalàna momba ny sosialim-bahoaka, indrindra ny momba ny fahasalamana.
Mandram-piandry izany anefa hoy izy dia efa misy fitiliana sy fanomezana fanafody maimaimpoana ho an'ireo izay tsy salama.
vendredi, 03 mai 2019 08:44